SingForYou.net - Tain Ta Man
By : sithunaung on May 28, 2010
Score: 115 Rating: 5.00 Comments: 35
Tain Ta Man's Description
တိမ်တမန်~~မြန်မာသံသီချင်းကိုနှစ်သက်လွန်းလို့ကြိုးစားပြီးဆိုလိုက်ပါတယ်~~ နောက်တစ်ချက်ကမြန်မာပြည်မှာမိုးပုလဲပန်းတွေရွာပါစေလို့ရည်ရွယ်ပြီး ဒီသီချင်းနဲ့စေတနာဆုတောင်းပေးလိုက်တာပါ~ ဝေဖန်အကြံပေးမှုများကိုလက်ခံကြိဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ~ ဒီသီချင်းကိုသီဆိုဖို့တိုက်တွန်းအကြံပေးတဲ့ညီမငယ်စူစန်ကိုကျေးဇူးအထူး~~ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ~:))(ဦးတောသားလေး၊ဦးအောင်ခိုင်၊ဦးမောင်၊မသန့်တို့ရေ ကျေးဇူးပြူ၍နားလည်ခွင့်လွတ်ပေးပါ)~
greenlay on Jun 1, 2010 0
ဗဲရီးနိုက်စ်ပါ bro ၅*
hippo on May 31, 2010 0
really great par bro yay ... ***** ...
aungtun1 on May 29, 2010 0
brother's vocal natdsong nat ka,, ta gal ko lite phat par tal bro yay,,,,,... very very nice one par bro****************
avatar on May 29, 2010 0
အရမ်းကောင်းတယ် ကိုစည်သူရေ........ အားပေးသွားပါတယ် ဗျာ အ၇မ်းကို အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ သီချင်းလေးပါ .......5*****
Zarmaung on May 29, 2010 0
ဒါမျိုးတွေလဲ ကောင်းတာဘဲ ..ရှယ်...************For Bro
turikimuriki on May 29, 2010 0
really nice ... 5*4u :-)
maung309 on May 29, 2010 0
very nice par Ko Sithu.. de lo myanmar than lay tway kyite loe so tar kaung par tal.. so yinn nae paing thwarr hmar pawt, myanmar than lay yaw, pop lay yaw asone try lote tar kaung par tal... uncle ka arr pay par tal *******
Rosies on May 29, 2010 0
nice aye aye lay nat naww shel pa tot clap clap so nice bro yay arr par nay del good bro yay for you 5*4*****************************
sithunaung on May 29, 2010 0
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis rosies ရေ :)
jpkglay on May 29, 2010 0
ဘရိုကြီးရေ.... ကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်သော သီချင်းလေးကို ဆိုထားတာ ဒီမနက်ကတွေ့လိုက်တယ်.... ကောင်းတယ်ဗျာ.....း))))
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro jpkglay ရေ ,bro lae try kyi per ohn ,i hope this song match wz ur vocal :)
lwantatthu10 on May 29, 2010 0
bro နဲ့ ထပ်တူဆုတောင်းနေပါတယ်ဗျာ ... ဆိုထားတာလည်းကောင်းမှ ကောင်းပါ .... **********
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro lwantathu ရေ :)
ahlwan69 on May 29, 2010 0
အသံလဲကောင်း လူ လဲ ဘဲ........? မြန်မာပြည်တောင် ပြန်ချင် လာ ပြီ။ အားပေးနားဆင် သွားပါ တယ် နော်။
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bro ahlwan ရေ :)
honeyngal on May 29, 2010 0
di thi chin lay koayan kyite tal...so htar tar lae pyaw ma pya tat aung ko kaung par tal*****
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis honeyngal ရေ :)
sumyar on May 29, 2010 0
arr pay nar sin twar par tal bro sithu...so htar tar lalayan kg tal..su tg lay tway lal pyae mar par bro yay...khu moe tway ywar nay p bro yay...
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis sumyar ရေ :)
soramoe on May 29, 2010 0
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်း အဆိုကောင်း အ သံ ကောင်း တဲ. C2 ကြီ: ရေလေး စား ပါ တယ် တ ကယ် အ ဆို တော် တယ်..MM pyiatwat lae C2 naea..tu lite su tg lite par tal.. Gazillion stars tway pay lite par tal
susannyunn on May 29, 2010 0
အမိမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာပုလဲပန်းတေချွေနေပါပြီ ဘရိုဂျီးရေ :)) ဒီသီချင်းလေးနဲ့အတူ.........မြန်မာပြည်သူပြည်သားတေအေးချမ်းဂျပါစေကြောင်းစူစန်လဲ ဆုတောင်းးး လိုက်ပါရဲ့နော် :pray >>>> MILLION******** ပါချင့်C2 ဂျီးရေ သီရှိုပေးလို့ကျေးဇူးး အထူးးးးးးး :thanx >>>>>
snowgirl on May 29, 2010 0
bro gyii yaydsong ko listen pee myanmar pyii mhar moe ywar par say loet su taung pay lite par dal shin :Dakhu lal moe ywar nay par b, bro gyii tain ta mann song sing lite loet lay :) cha noe gal lay arr pay thwar par dal *******ayan ko listen loet kg par dal shin ;clap; ;clap;
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis snowgirl ရေ :)
thant on May 29, 2010 0
Swel sone ya aso taw tae........Bro Sithu yay..........d lo song myo tway ko..........nit thet pye lite so tar ko bae........ayann ko kyay zuu tin par tal..........takal ko bae......narr htaung lo kg tal.........*********
songlover015 on May 29, 2010 0
ထုံးစံ အတိုင်း အရမ်းကောင်းပါတယ် စည်သူရေ~~စွယ်စုံရပဲ~~ ၅ စတား ***** ဗုတ် ခဲ့ပါတယ်.... ((အေးအေးချမ်းချမ်းရွာပါစေ...))
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis songlover ရေ :)
yinmin on May 29, 2010 0
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis yinmin ရေ :)
clover on May 29, 2010 0
bro g tg dae su nae pyae par say...........sis lae su tg lite par tal....so thwar dar ka dod shal par pal
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis clover ရေ :)
president4heart on May 29, 2010 0
inn..myanmar song net po kg ta lo be naw..စောစောစီးစီးနားထောင်ရတာမင်္ဂလာရှိလှပါတယ်...5*********************************
ဦးဦးဖျားဖျားအားပေးနားဆင်သွားတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် sis president4heart ရေ~~း))
Feedback : 20